Shirk u saabsan Higsiga Cusub ee Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Waxaa manta markale Muqdisho lagu qabtay shir ku saabsan Higsiga Cusub (New Deal) ee Soomaaliya, waxaana dadka ka qeybgalay ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Wasiirka Arrimaha dibadda iyo dhiira gelinta maalgeshiga Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle, Xildhibaano, mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka, qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, safiirada qaar ka mid ah dalalka caalamka Soomaaliya u fadhiya, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD, Bankiga Adduunka iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ka socotay.
Shirka oo si wadajir ah u shir guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo u qeybsamaha Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya Nickolas Kay ayaa waxaa inta uu socday la isla soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin qodobadii kasoo baxay shirarkii ka dhacay dalalka Britian iyo Belgium iyo sidoo kale balan qaadyadii Soomaaliya shirarkaasi loogu sameeyay, iyadoo Madaxweynaha Jamnhuuriyadda Soomaaliya uu shirka ka jeediyay qudbad ku saabsan waxtarka Barnaamijka New Deal uu Soomaaliya u leeyahay.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiiragelinta maalgeshiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo la hadlay warbaahinta ayaa faah-faahin ka bixiyay qodobadii shirka maanta kasoo baxay oo ay ugu muhiimsantahay in uu jiro shir kan la mid ah oo lagu qaban doono dalka Denmark.
Waa shir sanadkiiba dhowr jeer la qabto waxaana looga hadlayaa barnaamijka hiigsiga cusub ee New Deal oo ah in si wanaagsan loogu faa’iideysto wadamada deeqaha bixiya ay ugu deeqaan Soomaaliya, sidoo kale shirka maanta ayaa waxaa uu hordhac u ahaa shir kale arrimaha hiigsiga cusub ee New Deal looga hadlayo oo bisha November ee sanadkan ka dhici doona magaaladda Copenhagen ee xarunta dalka Denmark.
Horay ayaa shirar nuucaan ah loogu qabtay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa, inkastoo aysan weli muuqan natiijo cad oo kazoo baxday waxyaabaha laga wada hadlay.
Ciqaabta uu la kulmayo qofkii qaad lagu qabto gudaha Britain